ब्लग आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने उत्कृष्ट थलो बनेको छ-अर्घेलो थापा - MeroReport
ब्लग आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने उत्कृष्ट थलो बनेको छ-अर्घेलो थापा
साहित्य, चलचित्र, घुमफिर तथा फोटोग्राफीमा विशेष रुचि भएका उनी चाडैँ नै कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने योजनामा छन् । उनी अर्थात अर्घेलो थापा, उनको वास्तविक नाम अर्घेलो होइन तर आफुलाई भने यही नामले चिनाउन चाहन्छन् । स्थायी घर गुल्मी भएका अर्घेलो हाल पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा नेपाली विषयमा स्नाकोत्तर दोस्रो वर्षमा अध्यनरत छन् । नेपाली चलचित्रको स्कृप्ट पनि लेख्ने प्रयासमा रहेका अर्घेलो साथीहरुको सहकार्यमा केही महिनाभित्र एउटा रेडियो नाटक पनि उत्पादन गर्ने तयारीमा छन् । अध्ययन तथा लेखनका अलवा उनी सोसल मिडिया र ब्लग लेखनमा पनि सक्रिय छन् । मेरो रिर्पोटको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै अर्घेलो थापालाई प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
तपाईको वास्तविक नाम नै अर्घेलो थापा ?
वास्तविक नाम अर्घेलो थापा होइन तर म आफूलाई यही नामबाट चिनाउन चाहन्छु । हाल एम.एड. तहमा नेपाली विषय लिएर दोश्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछु । सपनाहरू पूरा गर्ने आशामा घरपरिवारबाट टाढा भएर पोखरामा सङ्घर्ष गर्दैछु । शिक्षा विषय लिएर पढेपनि भविष्यमा नेपाली भाषा सम्पादक र लेखक बन्ने चाहना छ ।
सोसल मिडियामा आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ, एउटा ब्लगरका रुपमा या अरु केही ?
मलाई अरुले लेखक भनेर चिने हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर अझै पनि परिचय बनाउन सकेको छैन । ब्लग त आफ्ना लेखलाई प्रकाशन गर्नका लागि खोजिएको एउटा विकल्प मात्र हो । यद्यपि केही साथीहरूले मलाई ब्लगरका रुपमा चिन्नुहुन्छ । दश हजार भन्दा धेरैले मेरो ब्लग भिजिट गरिसक्नुभएको छ ।
ट्वीटरका साथीहरूले ब्लग चलाएको देखेर नजानेरै आफ्नो ब्लग बनाएँ । खासगरी आफूमा भएको ज्ञान ब्लगमार्फत सेयर गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर ब्लग सुरु गरेको थिएँ । मैले ब्लग २०७० सालबाट सुरु गरेको हुँ । अहिले त ब्लग आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने उत्कृष्ट थलो बनेको छ ।
म त्यति धेरै ब्लग प्रयोग गर्दिन किनकि मसँग ब्लगका लागि उपयुक्त खुराकको कमी छ । खासगरी म आफ्ना सृजना प्रकाशन गर्न ब्लगिङ गर्ने गर्छु । साथीहरूबाट छिटो भन्दा छिटो प्रतिकृया लिनका लागि ब्लग जस्तो उपयुक्त अरु कुनै माध्यम हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
आफ्नो ब्लगमा के कुराहरु राख्न बढी रुचाउनुहुन्छ?
मेरो रुचि साहित्य क्षेत्रमा छ । नेपाली साहित्यको विद्यार्थी भएकाले भनौं, म प्राय साहित्यलाई नै प्राथमिकता दिने गर्छु । यस अलावा आफूलाई भन्न मन लागेको कुरा ब्लगमार्फत सबैसँग सेयर गर्ने गर्छु । सम्भव भएसम्म ब्लगलाई परिस्कृत गर्दै फोटोग्राफी र चलचित्र सम्बन्धी रिभ्यु पनि ब्लगमा समावेश गर्ने सोंचमा छु ।
तपाईले चलाउने ब्लग http://www.arghelo.blogspot.com/ मात्रै हो कि यो बाहेक अरु पनि छन् ?
मेरो आफ्नो ब्लग http://www.arghelo.blogspot.com मात्र हो । सकियो भने केही समयपछि एउटा साहित्यिक ब्लग (सबै साहित्यकारका सृजना प्रकाशन गर्ने गरी) चलाउने योजना छ ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर निरन्तर ब्लग गरिरहन या ब्लगलाइ समय दिन त गाह्रो छ नि हैन ?
निरन्तर ब्लगिङ गर्नेका लागि समयको अभाव होला । म जस्तो ब्लगरका लागि त्यति धेरै समय दिइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सुरुमा ब्लग डिजाइन गर्न गाह्रो पर्ला तर ब्लगलाई पूर्णता दिइसकेपछि धेरै समय छुट्याउनु पर्दैन । साथीहरुले ब्लगमा नयाँ कुरा पढ्न पाइएन भन्दा भने समय मिलाएरै भए पनि नयाँ कुरा लेख्नैपर्ने हुन्छ । खासै गाह्रो भने हुँदैन ।
जुनसुकै कामको पनि पहिलो सिकाइ चुनौतिपूर्ण हुन्छ । तर आफूले ब्लगिङ गर्न थालेपछि त्यति गाह्रो हुँदैन । ब्लगिङमा खासै चुनौती छन् जस्तो लाग्दैन । यद्यपि ब्लगमा सक्रिय हुन पाठकलाई केही नयाँ खुराक पस्किनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि केही समय र दिमाग त पक्कै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यही नै चुनौती भनौं ।
अनि नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोग?
ब्लगिङको दुरुपयोग भएको पनि धेरै देखेको छु । कमाइका लोभमा नेपालका धेरैजसो ब्लगरहरूले गलत जानकारीहरू प्रकाशन गर्ने, यौनलाई बढी प्राथमिकता दिने आदि क्रियाकलाप गर्नाले धेरैजसो पाठकमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भैरहेको छ । यति मात्र नभएर नेपाली भाषाको समेत बिसङ्गति भइरहेको छ । तर दुरुपयोगभन्दा सदुपयोग धेरै भएको छ । ब्लगिङको कारणले गर्दा नै हामी अन्य ब्लगरमार्फत धेरै कुरा हासिल गर्न सकिरहेका छौं ।
ब्लगिङ बाहेक तपाईको अर्को रुचिको बिषय चाँही के हो?
मेरो रुचि नै साहित्य हो । लेखन हो । त्यसका अलावा सामाजिक सञ्जालमा रमाउनु, सामाजिक सहकार्य गर्नु, चलचित्र हेर्नु पनि मेरो रुचि हो ।
समय मिल्यो भने प्राय ब्लग पढ्ने गर्छु । मलाई यस्तै विषयवस्तु भन्ने छैन । प्राय सबै खालका ब्लगहरू पढ्ने गर्छु । ट्वीटरमा साथीहरूले सेयर गर्नुभएका ब्लगका लिंकका आधारमा ब्लग पढ्ने गर्छु । नेपालमा विज्ञानसम्बन्धी ब्लग अलि कम भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ ।
यस्ता ब्लगहरू प्राय छन् । धेरैजसो विज्ञले आफ्ना ब्लग बनाउनुभएको छ । उहाँहरूले प्राय सामाजिक हितमा लेख्ने गर्नुहुन्छ ।
ब्लगिङ वा ब्लगरका लागि आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरापनि उठिरहेको हुन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागि आचारसंहिता?
मेरो विचारमा ब्लगिङ विल्कुल स्वतन्त्र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर केही ब्लगरले आफ्नो स्वार्थका लागि अरुको अवहेलना गरेको पनि पाइन्छ । यस अर्थमा भने आचारसहिंताको जरुरी छ ।
सबैले अरुलाई असर नपुग्ने गरी ब्लगिङ गरेजस्तो लाग्छ ।
मैले आफ्नो वास्तविक घटनामा आधारित कथा इ–लभ लेखेर ब्लगमा प्रकाशन गरेपछि एकजना साथीले कमेन्टमा हेल्लो आइ एम विनोद भनेर लेख्नुभएको थियो । त्यो कमेन्टले मलाई साँच्ची हाँसो उठ्यो किनकि मैले उक्त पात्रलाई चिनेको थिइन । एकछिन त हो कि झैं लाग्यो तर उहाँले मजाक गर्नुभएको रहेछ ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसल मिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो?
फेसबुक परिवार तथा साथीहरूको सर्कलमा रमाउनका लागि सही छ । ट्वीटर आफ्ना विचार तथा सृजनाको तत्काल प्रतिकृया पाउनका लागि उपयोगी छ भने ब्लगलाई हामी अनलाइन डायरीका रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौं । ब्लग एउटा खुल्ला डायरी हो, जुन संसारभरका पाठकका अगाडि एकैछिनमा उपलब्ध हुन सक्छ ।
सोसल मिडियाको प्रयोग बढ्दो छ । आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न हामी सबैका लागि उपयोगी भएको छ । तर युवापुस्तामा यसको अत्यधिक प्रयोगले नकारात्मक असर पुर्याएको छ । जोश जाँगर भएको उमेरमा काम गर्नुको साटो चौबिसै घण्टा सोसियल मिडियामा झुम्मिनाले महत्वपूर्ण समय खेर गइरहेको छ ।
ब्लगिङलाइ कहीं कतै बैकल्पिक मिडिया अर्थात आफ्ना कुराहरु आफ्नै तरिकाले अभिव्यक्त गर्ने थलो र व्यक्तिको निजी मिडियाका रुपमा पनि भन्ने गरेको पाइन्छ तर पनि यो अझै काठमाण्डौ केन्द्रित मात्र भइरहेको छ र मोफसलमा ब्लगरहरु एकदमै कम छन भन्ने पनि गरिन्छ नि । किन होला?
हो, ब्लग बैकल्पिक मिडिया भएको छ । मिडियामा स्थान नपाएका आफ्ना विचार तथा सृजनाहरू ब्लगरले आफ्नो ब्लगमार्फत सेयर गर्न सक्छन् । जहाँसम्म काठमाडौंमा ब्लगर धेरै छन् भन्ने कुरा छ, मेरो विचारमा काठमाडौंमा युवा सहभागिता बढी हुनु, मोफसलका ब्लगरलाई केन्द्रीय ब्लगर तथा मिडियाले सकुंचित दृष्टिकोणले हेर्नु जस्ता कारणले मोफसलमा ब्लगर कम भएको हुनसक्छ ।
ब्लगिङलाई नागरिक पत्रकारिताका रुपमा नबुझ्दा नै उचित होला । पत्रकारिताको आफ्नै नियम छ । सबै ब्लगर पत्रकार हुन सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरोरिपोर्ट टिमलाई । हजुरहरूले मेरो ब्लगलाई स्थान दिनुभएकोमा आभारी छु । यो सह्रानीय कार्यले मलाई ब्लग लेखनमा अझ धेरै प्रोत्साहन मिलेको छ । साथै हजुरहरुको यो सकारात्मक कार्यले ब्लग लेख्न र बुझ्न चाहने सबैका लागि प्रोत्साहन थपेको महशुस भएको छ ।